You are here: Home somal Tartankii Ciyaaraha Kubedda Koleyga Ee Xaaji GUJIS CUP Oo Lasoo Gebo-gabeeyey &Damaashaadka Kooxda Ku Guulaystay
Tartan oo uu qabtay Xidhiidhka Kubadda Kolayga Somaliland oo kaashanaya dawladda hoose ee Hargeysa, kana qaybgaleen toddobada kooxood oo ka dhisan caasimadda oo ilaa 15-kii bishii Ramadaan ku ciyaarayey garoonka Tima-cadde, ayaa gunnaanadkiisii waxa isugu soo hadhay labada kooxood IFTIN ee Wasaaradda Waxbarashada iyo kooxda Macdanta iyo Tamarta.
Ciyaartii gabogabada tartanka oo la qabtay habeenimadii ciiddu soo galaysay, waxay guushu ku raacday kooxda Wasaaradda Macdanta iyo Tamarta oo ku awood sheegatay 44 dhibcood, halka kooxda IFTIN ka keensatay 25 dhibcood.
Sidoo kale, tartan kale oo isla garoonka Timacade loogu qabtay kooxaha heerka saddexaad ee kubadda Kolayga bishii Ramadaan, kuna tartameen toddoba kooxood, waxa isna ku guulaysatay kooxda Jig-jiga yar oo la siiyey koobkii la dhigay.
Xaflad loo sameeyey bixinta abaalmarinaha tartankannadaasi oo isla habeenkaasi lagu qabtay garoonka Tima-cadde waxan ka qaybgalay masuuliyiin ay ka mid yihiin Agaasimaha Guud ee Wasaaradda Dhallinyarada, Ciyaaraha iyo Dalxiiska Maxamed Xuseen Axmed, Xildhibaan Ismaaciil Cagoyare iyo Guddoomiyaha Xidhiidhka Kubadda Kolayga Maxamuud Xasan Cabdillaahi iyo masuuliyiin ka socda wasaaraddaha labada kooxood ku kala ciyaarayeen magacyadooda.
Guddoomiyaha Xidhiidhka Kubadda Kolayga Maxamuud Xasan Cabdillaahi oo ka hadlay xafladdaasi ayaa ka warramay tartankan iyo heerarka uu soo maray, isagoo dhallinyarada ku dhiirigeliyey inay sii wadaan dadaalkooda kubadda kolayga. Waxa kale oo uu u mahadceliyey Maayarka caasimadda Md. Cabdiraxmaan Maxamuud Caydiid (Soltelco) oo sheegay inuu door muhiim ka qaatay hirgelinta tartankan, sidoo kalena waxa uu u mahadnaqay Wasaaradda Dhallinyarada iyo Ciyaaraha oo ka qaybqaadatay dadaalka qabashada tartankan.
Xildhibaan Ismaaciil Cagoyare oo isna halkaasi ka hadlay, ayaa ka sheekeeyey Alle u naxariistee Abwaan Xaaji Gujis oo loogu magacdaray oo uu sheegay inuu ahaa abwaan iyo fannaan kaalin wayn ka soo qaatay fanka, isla markaana uu ka mid ahaa bahda garoonka Tima-cadde ee Hargeysa.
Ugu dambayntii Agaasimaha Wasaaradda Dhallinyarada, Ciyaaraha iyo Dalxiiska Md. Maxamed Xuseen Axmed oo isagu koobabka labada tartan iyo abaalmarinnaha kale guddoonsiiyey ciyaartoyga labada kooxood ee Wasaaradda Macdanta iyo Tamarta iyo Jig-jiga yar, waxaanna hadal uu halkaasi ka jeediyey uu qabashada iyo hirgelinta tartanka uga mahadceliyey Maayarka caasimadda Cabdiraxmaan Soltelco iyo Xidhiidhka Kubadda Kolayga. Waxa kale oo uu xusay inay wasaarad ahaan dadaal ugu jiraan sidii loo horumarin lahaa guud ahaan ciyaaraha kala duwan ee dalka.
Xigasho Hubala media